Wow! A Limo! – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Wow! A Limo!
အတူပါသူ ရုံးက မိတ်ဆွေက အရင်ကတည်းက ရောက်ဖူးထားသူဖြစ်တော့ သူ့ဦးဆောင်မှုနောက်ကို ထော့ကျိုးထော့ကျိုးနဲ့ အသာလိုက်ရုံရှိတာပဲ။ သူက ခပ်တည်တည်ပဲ “လင်မဇီး(န်)” ငှားမယ်တဲ့။ လင်မဇီး(န်)ဆိုတာလောက်တော့ ကျွန်တော် သိတာပေါ့။ စာတွေ သည်လောက်ဖတ်၊ ရုပ်ရှင်တွေ သည်လောက်ကြည့်နေတာပဲ။ ဇိမ်ခံမှန်လုံကားကို ခေါ်တာ။ အတိုကောက် ကတော့ “လင်မို”တဲ့။ လင်ဖုန်းမို၊ ရွှင်ပြုံးချိုစွာနော်ဗျာ ဆိုတဲ့ ရှေးတုန်းက သီချင်း တစ်ပိုင်းတစ်စကို အောက်မေ့ချင်စရာပဲနော်။ စာလုံးပေါင်းက L-I-M-O-U-S-I-N-E ပါ။ အသံထွက်ကတော့ “လင်မဇီး(န်)”တဲ့။ လင် မစီးဘဲ မယားချည့် အိုက်တင်ခံပြီး စီးစီးနေတဲ့ကားလို့ မှတ်ထားမယ် ဆိုလည်း ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။
ငှားပေါ့။ လင်မဇီး(န်)မကလို့ “ချော့ပါ”ပဲ ငှားငှား။ ကျုပ်တို့ ပေးရတာမှ မဟုတ်တာ။ ကျသမျှ ရုံးက ပေးမှာပဲဟာ၊ ကြိတ်လိုက်ပေါ့။ သို့သော် ကျွန်တော် မျှော်လင့်ထားတဲ့ လင်မဇီး(န်)ဆိုတာက ဟို တံခါးခြောက်ပေါက်နဲ့ မှန်လုံကားအရှည်ကြီးဗျ။ အခုဟာက မဟုတ်ပေါင်။ သူတို့ လင်မဇီး(န်)လို့ ခေါ်တာက မာစီးဒီးကား ခပ်ကြီးကြီးအရွယ်ရှိတဲ့ တိုယိုတာ သရဖူအမှတ်တံဆိပ်ကားပေကပဲ။ ခေါင်မိုးပေါ်မှာတော့ အငှားယာဉ်ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လည်း ပစ္စည်းတွေကို နောက်က အံဖုံးထဲ ထိုး သိပ်ထည့်၊ ပြီးတော့ နောက်ခန်းမှာ စတိုင်အပြည့်နဲ့ ဝင်ထိုင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ ကားကြီးကလည်း လင်မဇီး(န်)ပီသစွာ ငြိမ့်ခနဲ ထွက်တယ်။
လမ်းကြီးက ကျယ်လိုက်တာပြောလို့ ဆိုသလိုပဲ ဖြောင့်လိုက်တာလည်း ဖြူးလို့။ ကားမောင်းသူရဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်က ထိုင်နေတာမို့ သူ့အမြန်နှုန်း ပြဒိုင်ခွက်ကို ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်။ အားပါး၊ တစ်နာရီကို ကီလို ၁၂၀နှုန်းလောက်နဲ့ တင်နေတာ။ တစ်နာရီကို ၇၅မိုင်နှုန်းပေါ့။ သို့သော် ဘာမှ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ မကောင်းတာကတော့ အမှန်ပဲ။ ဝါသနာပါရင် မှတ်စု စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်၊ ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး ရေးချင်တာ ချရေးနေရင်တောင် လက်ရေးလှလှ ဝိုင်းဝိုင်းညီညီလေးတွေ ထွက်လာလောက်အောင် ကားက ငြိမ်နေတယ်။
လမ်းဘေးဝဲယာမှာကလည်း ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘူး။ အဲ… အဲသလို ပြောရင် နည်းနည်းတော့ မှားသဗျ။ စိတ်ထင် တစ်မိုင်ခြား တစ်ခါလောက်မှာ အများသုံး တယ်လီဖုန်းတိုင်လေးတွေတော့ စွတ်ကယ်စွတ်ကယ်နဲ့ မနားတမ်း မြင်ခဲ့ရပါသဗျ။ ကြည့်ရတာ သည်တိုင်းပြည်မှာ ညနေတိုင်ကျ စည်ကားနေတတ်တဲ့ ရန်ကုန်ရွှေဘုံသာလမ်းနဲ့ အနော်ရထာလမ်းထောင့် တစ်ဝိုက်ဆီက လျှပ်စစ်ပစ္စည်းစုံ အစုတ်အပြတ်ရော၊ ကောင်းတာရော၊ သူခိုး လက်ခံရော အကုန်အစုံရောင်းနေတဲ့ တိုလီမိုလီဈေးလိုဟာမျိုး မရှိဘူး ထင်တယ်။
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ကူးထဲမှာ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမှာ အများသုံး တယ်လီဖုန်းလေးတွေ တစ်မိုင်ခြား တစ်လုံးလောက် တပ်ဆင်ကြည့်မိလိုက် ရပြန်သေးတယ်။ အံမယ်မင်း… မဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့အများသုံး ဖုန်းဆိုတာက သူ့ချည့်ထားလို့မှမရတာနော်။ ဖုန်းတစ်လုံးမှာ လူတစ်ယောက်တော့ အစောင့်ချထားပေးမှ ဖြစ်မှာလေ။ တစ်မိုင်ခြား တစ်လုံးဆို မိုင်ပေါင်း ၄၀ဝကျော်၊ လူပေါင်း ၄၀ဝကျော် ခန့်မှ ဖြစ်မှာ။ မဖြစ်သေးပါဘူးလေ။
အဲ… အဲဒီ့ တယ်လီဖုန်းလေးတွေကလွဲရင် လမ်းဘေး ဝဲယာမှာလည်း ဘာမှ ကြည့်စရာမရှိ၊ လမ်းကလည်းဖြူးနေတော့ အတော်ပျင်းခြောက် လာရပါတယ်။ အတူပါတဲ့ မိတ်ဆွေကြီးကလည်း အင်မတန် နှုတ်နည်းတဲ့သူ။ သူ့နှုတ်က ထွက်ရင်လည်း ဘုခွကန့်လန့်က ခပ်များများဆိုတော့ သူ့လည်း စကားသွား မဖောင်ရဲဘူး။ အဲလိုနဲ့ တစ်နာရီကျော် စီးရတဲ့ ခရီးကို လင်မဇီး(န်)ကြီးနဲ့ ငြီးစော်နံစွာ စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့ရပါတယ်။
Author lettwebawPosted on 24 October 2009 17 February 2010 Categories Excerpts, Reproduction, Travelogue
Previous Previous post: So What ???
Next Next post: Lived Life With Unflagging Zest